Rakkoo Uummataa Sadarkaa Yaadaa Qofatti Dubbatanii Darbuun Furmaataf Nageenya Biyyatti Kan Eegsisu Miti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsRakkoo Uummataa Sadarkaa Yaadaa Qofatti Dubbatanii Darbuun Furmaataf Nageenya Biyyatti Kan Eegsisu Miti
Finfinnee Oromiyaa, Caamsaa 17, 2018
1. Qotee Bulaan maal keessa jira?
Rakkoowaan olii Kana cinatti daballiin gibiraa waggaa waggaatti Qote bultoota Oromoo irra gahaa jira. Doorsisni lafti kan Mootummaati hojjettan hojjechuu dadhabdan abbaa qabeenyaa biyyattii misoomsuu danda’uuf laatama jedhuun Qote bultoonni dararamaa jiru. Lafti akka harka Qote bulaa hinjirre waltajjiwwan hedduurratti himuun doorsisa jabaan uummata baadiyyaa goolaa jiran. Dabalataan lafti hektaarri tokko Baaleetti qamadii kuntaala 100 baha, wallaggattis hanganuma bahuu qaba. Kana galchaa hinjirtu taanan qotuu waan hindandeenyeef abbaa qabeenyaa misoomsuuf laatamee abbaa qabeenyaa jalatti hojjettu jechuun waggoota 4 as doorsisa ture ammallee cimee itti fufee jira. Lafti qote bultootaa safaramaas jira, safarrii sanaan ammoo laftikee baay’edha hoji dhabaadhaaf laanna jechuun uummata walitti diruun wal dhabsiisuu irratti hojjetamaa jira. Kanaaf dhaadannoo “Lafa keenya irratti lafee goota Oromootu cabe, saanichi lafaa ha dhaabbatu” jedhun sagalee dhageessisuu itti fufna.
2. Uummanni Oromoo naannoo magaalaalee jiraan haala akkamii keessa jiru?
3. Daldalaan Oromoo maal keessa jira?
4. Uummanni Oromoo naannoo Waarshaa jiru rakkoo akkamiif saaxilame?
5. Barataan Oromoo rakkoo akkamii keessa jira?
6. Hojjetoota Mootummaa Oromoo
Maayirratti rakkoo uummataa sadarkaa afaanii qofatti dubbatanii bira darbuun furmaataaf nageenya biyyatti kan eegsisu miti. Kanaaf rakkiin sabaaf gaaffiin uummataa haqa ta’uu erga amananii gaaffii sabaa deebisuun dirqama. Qabsoon itti jirru furmaata barbaaduuf qaamni mootummaadha ogiin jedhu hanga jechaatti malee gochaan waan fire hinqabu. Kanaaf qabsoon uummataa jabaatee Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin itti fufuun uummata Oromoo qaanii waggaa dheeraaf gaddaaf gadadoo keessa baasuuf nii hojjenna